Biden ayaa ku sifeeyey Putin inuu yahay dilaa, uuna bixin doono qiimaha faragelintii la sheegay… – Hagaag.com
Biden ayaa ku sifeeyey Putin inuu yahay dilaa, uuna bixin doono qiimaha faragelintii la sheegay…
Posted on 17 Maarso 2021 by Admin in World // 0 Comments
Ruushka ayaa wuxuu si adag u cambaareeyay hadalkii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee uu ku sifeeyay madaxweyne Vladimir Putin inuu yahay gacan ku dhiigle, wuxuuna balan qaaday inuu bixin doono qiimaha faragelintii la sheegay inuu ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee dhowaan dhacday.
Falcelintii ugu horreysay ee Ruushka, madaxa Duma ee Ruushka, Vyacheslav Volodin, ayaa sheegay Arbacada maanta in weerarkii Biden ee Putin uu ahaa weerar lagu qaaday Ruushka.
Volodin wuxuu intaas ku daray in hadalada Biden ee ka dhanka ah Putin ay yihiin kuwo meel ka dhac ku ah muwaadiniinta Ruushka, wuxuuna muujiyay waxa uu ugu yeeray “jahwareerka” maamulka Mareykanka.
Wareysi laga sii daayay maanta fajirkii shabakada ABC ayaa Madaxweynaha Mareykanka wuxuu wacad ku maray in Russia ay bixin doonto qiimo haddii lagu cadeeyo inay faragalin ku sameysay doorashooyinka Mareykanka.
Biden wuxuu sheegay in isaga iyo madaxweyne Putin ay sifiican isku yaqaanaan, isla markaana madaxweynaha Ruushka uu u diyaar garoobo inuu bixiyo qiimaha faragelinta hadii la cadeeyo inuu faragalin ku sameeyay doorashadii Mareykanka.
Wuxuu intaas ku daray inuusan u maleynaynin in hogaamiyaha Russia uu qalbi leeyahay, intii lagu guda jiray wareysiga ayaa la weydiiyey inuu aaminsan yahay in Putin dilaa ama gacan ku dhiigle uu yahay, wuxuu ku jawaabay “sidaasi ayaan qabaa.”
Markii la weydiiyay cawaaqibka waxa uu yahay, Biden ayaa wuxuu yiri, “Waxaad arki doontaan dhowaan.”
Ballanqaadka Biden ayaa yimid ka dib markii la sii daayay warbixin sirdoonka Mareykanka ah oo taageertay eedeymo hore oo ahaa in madaxweynaha Ruushka uu ka dambeeyay faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka, taas oo Moscow ay dhowr jeer beenisay.
Warbixinta ayaa sheegtay in faragalinta Ruushka ee doorashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ay bartilmaameedsaneysay Biden, oo ugu dambeyn ka guuleystay ninka la tartamayay ee xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump.
Isla waraysigaas, Biden wuxuu cadeeyay inuu cusboonaysiiyay heshiiskii “START” ee yareynta hubka istiraatiijiga ah ee kala dhaxeeya Ruushka sababo la xiriira danaha dalkiisa.
Wuxuu sidoo kale tilmaamay inuu qarka u saaran yahay inuu go’aan ka gaaro goorta ciidamada dalkiisa ay ka baxayaan Afghanistan.
Madaxtooyada Ruushka (Kremlin) waxay sheegtay in warbixinta sirdoonka Mareykanka ee ku saabsan faragalinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee ugu dambeysay Mareykanka ay dhaawaceyso xiriirkii horey u sii xumaa ee u dhaxeeyay Moscow iyo Washington.
Kuxigeenka Wasiirka Arimaha Dibada ee Ruushka Sergey Ryabkov ayaa ku tilmaamay eedeymaha Mareykanka ee dalkiisa ee faragalinta doorashadii madaxtinimada ee dhoweyd inay yihiin kuwo ay warbaahinta buunbuunisay oo aan loo heynin xaqiiq.
Ryabkov wuxuu sheegay in dalkiisa uusan ka walaacsaneyn hanjabaada Washington ee ah inay cunaqabateyn cusub saari doonto arrintan darteed, isagoo xusay in Washington ay u heysato dariiqa cunaqabateynta qaab lagu tilmaamay mid waali ah.
Wuxuu intaas ku daray in nuxurka warbixinta sirdoonka Mareykanka – oo la shaaciyey Talaadadii loo diyaariyay arrimo horey loo sii qorsheeyay, laguna beddelay sidoo kale natiijooyinka horay loo ogaa, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Marka laga hadlayo go’aanka Britain ee ah inay kordhineyso hubkeeda niyukleerka, Ryabkov wuxuu rumeysan yahay in go’aankan uu dhaawac siyaasadeed u geysan doono fikradda xoojinta xasilloonida adduunka, iyo in Moscow ay tixgelin siin doonto marka ay horumarinayso istiraatiijiyaddeeda milatari wax uu ku tilmaamay inay tahay boodboodka London.